Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya Diyaar uma aha Hadda Inay la Wareegto Somaliya, hasa Ahaatee …!
Itobiya Diyaar uma aha Hadda Inay la Wareegto Somaliya, hasa Ahaatee …!
Posted by ONA Admin	/ November 12, 2014
Itobiya waxay ka cabsi qabtaa waqtigay ugu talagashay oon la gaadhin inay Somaliya burburto. Dad dhowr ah oo siyaasiyiinta Itobiya ku dhex jira ayaa arintaa ii sheegay, wuxuuna raaciyay midkood, waxaana laga yaabaa inay ka hortagaan arintaasi in aanay dhicin inta laga gaadhayo taariikhday u qabteen inay kala yaacdo ama kala diraan qabiilada Somaliya ee isku haysta inay yihiin dawlad madax-banaan, inta ay jirto aqoonsiga caalamiga ee dawladii Somalia. (Noora Afgaab).
Waxaa hubaal ah inay heshay Itobiya fursad aanay waligeed ku riyoonin si fiicanna ay uga faa’idaysatay. Furasada Itobiya ay ka heshay Somalida waxay bilaabatay markuu Col Cabdulaahi Yusuf u cararay Itobiya ka dib markuu ka dhicisoobay afgambigii 1978kii ay isku dayeen saraakiil ka mid ahaa Xoogga Dalka Somaliyeed, iyadoo dagaalkii labada ciidan ee Soamlia iyo Itobiya aanu weli soo afjarmin. Waxay Itobiya halkaa ka heshay, markii ugu horeysay taariikhda labada shacab, inay usoo galaan saraakiil sare oo ka mid ahaa kuwii bila kahor la dagaalamayay, iyagoo ka doonaya inay hubeeyaan say xabadii ku socotay Itobiya ugu jeediyaan ciidankii ay shalay hogaaminayeen. Laga bilaabo taariikhdaa waxaa sii baaba’ayay caadifadii iyo jacalykii loo hayay Somalinimada, Wadinayaddii Xooga Dalka Somaliyeed iyo Hiigsigii Xoreynta Dalalka Maqan.
Xukuumadii Mingisto ee fursadaa taariikhda Itobiya ku cusbayd la kulantay iyo Xukuumadda TPLF ee dhaxashay hawlihii uu Somaliya ka bilaabay Mingisto, laba qorshe oo kala duwan ayay ku hawlgaleen. Inkastoo ay isku hadaf yihiin, Mingisto qorshahiisa wuxuu ahaa inuu Ciidanka Somaliya burburiyo ka dibna shuruudihiisa u yeedhiyo kolba midka xukunka qabsada. Nidaamka hadda xukuma Itobiya oo la kulmay iyadoo Mingisto uu gaadhay hadafkiisii oo ciidankii Somaliya iyo Qarankii Somaliyeedba ay burbureen, waxay dajisteen ama loo daajiyay sida ay dad badan aaminsan yihiin, Istraatiijyad Cusub oo yoolkiisu yahay inay dadka Somalida ah iyagu dalbadaan inay ka mid noqdaan waxay ugu yeedheen Federaalka Itobiya. Iyagoo waliba kala socda oo isu haysta Dawladu kala maamul ah (SL, PL, JL, GML, AWL iwm). Siday ku gaadhi kartaa Itobiya Yoolkaa?
Istraatiijiyada loo marayo Yoolkaa waxaa la sheegayaa inay gacanta ku hayaan khubaro ku xeel dheer aqoonta la yidhaahdo Qaabaynta Bulshada (Social Engineering). Cilmigan oo siyaaba kala duwan loo sheego ayaa waxaa ka mid ah sharaxaada laga bixiyay inuu yahay; Aqoonta inay dadweynaha u hogaansamaan rabitaankaaga. “the art and science of getting people to comply to your wishes”. Sidoo kale waxaa ka mid ah; Inaad qofka ka hesho xogta aad u baahantahay adigoon dhexgalin nidaamkaa “getting needed information (for example, a password) from a person rather than breaking into a system.”
Itobiya barnaamijka ay ku maamusho Somalida waa midkaa Qaabaynta Bulshada. Xogta iyo sirta ay ka doonayso dhamaan maamulada ka dhismaya Somaliya oo loola soo ordo, iyo siyaasadaha ay rabto oo siday doonayso loogu fulinayo iyadoon ka dhex muuqanin fadhi-ku-dirirka ay ku dagaalamayaan siyaasiyiinta Somalida. Itobiya waxay doonaysaa inay arinta sidaa kusii socoto inta ay ka baxayaan saaxada (oy ka dhimanayaan) siyiisiyiintii soo arkay Qarinamadii Somaliya iyo Dawlad Somaliyeed oo qadarinta iyo haybadda ku dhex lahayd Afrika.
Waxay aaminsan yihiin khubaradan qorshaha u dajinaya Itobiya inta ka horeysa mudadaa hadday Itobiya soo dhexgasho Somaliya oy isku daydo inay goosato midhahaa oon u bislaanin, waxay keenaysaa inay dib u soo noolaato Wadinayadii oo dagaal lagaga xoroobayo Gumaysigeeda dadban uu ka bilowdo sidii ku dhacday markay soo galeen oy qabsadeen Xamar oo durbadiiba ay ku midoobeen xoogagii iska soo horjeeday Is-Bahaysiga Dibu-Xoreynta Somaliya.
Hadaba Itobiya waxaa u qorshaysan 10-15sano ka dib markay maamulka siyaasadeed gacanta ku dhigaan facaadii dhalatay ama barbaartay burburkii qaranimadii Somaliya ka dib (1990) inay iyagoo ka kooban ugu yaraan 10ban dawlad goboleed mid mid u dalban doonaan ka mid noqoshaha Federaalka Itobiya.
Inta ka horeysaa mudadaa Itobiya waxay ka fulinaysaa Somaliya falalkii u sahli lahaa arintaa oo sii kala fogayn lahaa ishaysashada bulshada.